Shaqaalaha aan duuliyaha lahayn ee American Airlines ee qaada COVID waa iskood
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shaqaalaha aan duuliyaha lahayn ee American Airlines ee qaada COVID waa iskood
Airlines • Aviation • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xubin ka tirsan shaqaalaha diyaaradda American Airlines
Siyaasadda cusub ee American Airlines waxay ka dhigan tahay shaqaalaha aan la tallaalin ee la soo degay COVID-19 waa inay u isticmaalaan maalmahooda jirrada wakhti kasta oo ay u baahan yihiin inay shaqada ka baxaan. Tani waxay soo afjaraysaa fasaxii faafa ee khaaska ahaa ee Mareykanku dejiyay ka dib markii coronavirus -ka markii ugu horreysay la ciyaaray - kuwa aan la aqoon, taasi waa.
Markii ugu horreysay ee COVID-19 uu soo baxo, shirkado badan ayaa u dhaqaaqay inay u abuuraan fasax masiibo kuwa ku dhacay coronavirus.
Hadda oo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka uu leeyahay tallaal la oggolaaday oo ka dhan ah COVID-19, tani waxay beddelaysaa wejiga waxa ay shirkaduhu diyaar u yihiin inay u qabtaan shaqaalaheeda doorta inaan la tallaalin.
Shaqaale badan oo cusub maalmahan ayaa laga rabaa inay muujiyaan caddaynta tallaalka si loo dhammaystiro nidaamka shaqaalaynta.
Siyaasadda cusubi waxay dhaqan geli doontaa horaanta bisha Oktoobar kuwa aan ahayn vaxxers-ka, si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha American Airlines ee la tallaalay ayaa weli ku jira siyaasadda fasaxa masiibada mana aha inay isticmaalaan maalmahooda jiran si ay fasax uga qaataan shaqada si ay u helaan si fiican.
Tani waxay umuuqataa inay tahay isbadal ka dhex jira shirkadaha diyaaradaha, maadaama Alaska Airlines ay sidoo kale ka hor istaagtay shaqaalaha aan xayeysiinta lahayn inay adeegsadaan lacag gaar ah oo COVID-19 ah shaqadii ka maqnayd fayraska awgiis.
Intaas kaliya maahan, Alaska Airlines waxay sidoo kale ku abaalmarinaysaa shaqaalaheeda $ 200 oo gunno ah tallaalka, dhammaan shaqaalaha cusub ee horay u socdaa waa inay muujiyaan caddeyn tallaal kahor inta aan si rasmi ah loo qorin. Shirkaddu waxay sidoo kale u baahan tahay dhammaan shaqaalaha aan tallaalin inay ka qaybgalaan barnaamijka waxbarashada tallaalka.
Bishii Las, United Airlines waxay ahayd markabkii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee u baahda tallaal dhammaan shaqaalaha gurigiisa. United waxaa ka shaqeeya 67,000 oo shaqaale ah oo dhammaan kireystayaasha cusub waa inay muujiyaan caddaynta tallaalka tan iyo Juun 2021. Xafiisyada shirkadda United, shaqaalaha aan asturneyn waa inay xirtaan maaskaro wejiga.
Shirkadda diyaaradaha ee Frontier ayaa sidoo kale u baahan doonta in shaqaalaha si buuxda loo tallaalo Oktoobar 1 -da ee sannadkan. Shaqaalahaas doorta inaan la tallaalin waxaa laga rabaa inay ka qaybgalaan baaritaanka joogtada ah ee COVID-19.
Diyaaradaha kale waxay isku dayayaan inay shaqaalahoodu helaan tallaal sida Alaska Airlines ay samaysay iyagoo bixinaya dhiirigelin sida mushahar dheeraad ah ama fasax lacag leh.
Maxaa kicinaya isbedeladan?
Marka Maamulka Dawooyinka ee Federaalka (FDA) ayaa oggolaaday Pfizer inuu yahay tallaal, tani waxay albaabada u furtay in shirkaduhu beddelaan siyaasaddooda COVID-19, maadaama ay tani inta badan sabab u ahayd shaqaalaha aan doonayn inay is-tallaalaan-in aan si rasmi ah loo helin wax tallaal ah.
Duulimaadyadu wali waxay u baahan yihiin dhammaan dadka saaran inay xirtaan maaskaro muddada duullimaadka, marka laga reebo markay wax cunayaan ama cabbayaan, dabcan.